I-Anantya Resort - iSiddhi Villa
I-Resort inikeza ichibi lokubhukuda elingaphandle, isikhungo se-spa kanye nokuphila kahle kanye nendawo yokubhucunga umzimba, ezungezwe uhlaza. Ihlinzeka ngemithi yokwelapha ye-ayurvedic eyiqiniso. Ukufinyelela kwe-WiFi yamahhala kuyatholakala kule ndawo yokungcebeleka.
Lapha uzothola ideski langaphambili lamahora angama-24, ingadi kanye nebha. Ezinye izinsiza ezihlinzekwa kule ndawo zihlanganisa indawo yokuphumula eyabelwene, igumbi lemidlalo kanye nedeski lokuvakasha. Imisebenzi eminingi ingajatshulelwa esizeni noma endaweni, okuhlanganisa nokuhamba ngebhayisikili. Indawo inikeza indawo yokupaka mahhala.
Lawa ma-Private Villas anengadi ehlanganisiwe anesango â€œPadipuraâ€ lendabuko elingakwazi ukuboshelwa ngaphakathi yisivakashi ukuze sibe nobumfihlo obuphelele. I-1000 sq.ft. yengadi yangasese inechibi lomnduze kanye nendawo yokuhlala efulelwe ngotshani/ I-Gazebo ongajabulela kuyo ukubuka kweChibi. Indawo yokugeza evulekele esibhakabhakeni ingenye into ekhangayo. Izingadi zeSiddhi Villas zonke zihlukile, zitshalwe ngezinhlobo zezitshalo zomdabu. I-Special Candle lite Dinner eGazebo ingahlelwa ngesicelo.
Okukhangayo lapha yiPlantation walk, Kanyakumari, Padmanabhapuram Palace, Mathur Aqueduct, Adikesava perumal temple Thiruvattar, Citharal Jain temple, Suchendram temple, Kovalam, Varkala Beach , Trivandrum, Thiruparappu Falls, Vattapara Tribal rettlement.
Le ndawo yokuphumula ingamamitha ayi-100 ukusuka eChittar Dam, 3 km ukusuka eTirparappu Waterfalls kanye ne-15 km ukusuka eThempelini laseThiruvattar. I-Padmanabhapuram Palace iqhele ngamakhilomitha angama-30. Isiteshi sebhasi saseKaliel singamakhilomitha ama-2. Isiteshi sikaloliwe iNagercoil singamakhilomitha angama-45 kanti isikhumulo sezindiza iThiruvananthapuram International singamakhilomitha angama-60.
Izindawo Zokungcebeleka ziphathwa amahora angu-24 ngosuku nochwepheshe abaqeqeshiwe Bokuphathwa Kwehhotela ukuze banakekele izidingo zezivakashi zethu.